पोर्नस्टार सन्नी लियानीले वाथरुममा के के देखाईन् ? (हेर्नुस् फोटोहरु)
मुम्बई । पोर्नस्टार तथा बलिउडकी चर्चित नायिका सन्नी लियोनीले वाथरुममा फोटोशुट गरेको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । पोर्नस्टार सन्नीले पार्न शैलीमा वाथरुममा फोटोशुट गराएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पोर्न सिनेमामा काम गर्दै आएकी...
चलचित्रका अभिनेताले आफ्नै छोरीको बलात्कार गरे
काठमाडौं । बाबुछोरीको सम्बन्ध पवित्र सम्बन्ध हो । जन्मिदा देखि हुर्काउने बढाउने पढाउने काम बाबुले गर्छ । त्यसको अर्थ यो होइनकी बाबुले आफ्नै छोरीका यौन शोषणा गरोस । तर, जर्मनका एक सुरपरस्टार अभिनेताले आफ्नै...
नायिका झरना विवाह बन्धनमा (फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं । नेपाली रजतपटतकी मोडल तथा नायिका झरना बज्रचार्य बिबाह बन्धनमा बाधिएकी छिन् । झरनाले भारतीय मुलका मलेसियिन व्यापारी राहुल अग्रवालसँग बिहे गरेकी हुन् । विगत ३ बर्षदेखि राहुलसंग प्रेममा रहेकी नायिका झरनाले बिहीबार...
भ्रष्टाचार मेटाउन गब्बर बन्दैछन् अक्षयकुमार
मुम्बई । बलिउडका चर्चित अभिनेता अक्षय कुमार भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागेका छन् । त्यसका लागि अक्षयकुमार गब्बर बन्दैछन् । अक्षयकुमार रियल लाईफमा नभई चलचित्र ‘गब्बर’बाट भ्रष्टाचार मेटाउदै छन् । गब्बरको प्रोमो अक्षयकुमारले ट्विटमार्फत सार्वजनिक गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले...
मञ्जुले गीत गाउँदै नाचेपछि दर्शकलाई हम्मे हम्मे
– अनिल खत्री गुल्मी । उद्घोषिका र गायिका पनि गायिकामा परिचित छन मञ्जु पौडेल, पछिल्लो समय यता उनी स्टेज कार्यक्रममा गित गाउने र कार्यक्रम पनि चलाउनमा ब्यस्त देखिएकी छिन । स्टेज कार्यक्रममा निकै चर्चित...
धुर्मुस र सुन्तलीको जोडीले अमेरिका तताउने, प्रमोदले नचाउने !
– विजय थापा डिसी, अमेरिका । नयाँ वर्षको अवसरमा धुम मच्चाउन नेपाल टेलिभिजन हास्य टेलिश्रृखला मेरी बास्सैका कालाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) तथा कुन्जना घिमिरे (सुन्तली) अमेरिका आउने भएका छन् । नयाँ बर्ष २०७२ को...
यी मोडल वाथरुममा किन नागिंन्छिन ? (हेर्नुस् फोटोहरु)
काठमाडौं । कलाकारहरु चर्चामा आउन विभिन्न तरिकाहरु अपनाउछन् । अहिलेकी चल्तिकी मोडल तिर्सना बुढाथोकी पनि चर्चामा आउन अनेक अनेक उपाय अपनाउँछिन् । तिर्सनालाई चर्चासँगै जवानीको तिर्सना पनि लागेको जस्तो छ । तिर्सना आजभोली वाथरुममा नागिंएर...
अष्ट्रेलियामा दिपक र दिपाश्रीको यस्तो मस्ती (हेर्नुहोस् फोटोहरु)
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको चर्चित हास्य टेलिश्रृखला तितो सत्यको जोडी दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला अहिले सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । अष्ट्रेलियामा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने यो जोडी सहितको टोली आफै मस्तीमा छन्...
‘सेक्स भोक प्यास हो, जसलाई मेटाउन अति आवश्यक छ’
काठमाडौं । पछिल्लो समय म्युजिक बजारमा चर्चामा छिन् मोडेल निलिमा नगरकोटी । एकआध म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी निलिमाको चर्चा सञ्चारमाध्यममा भइराखेको हुन्छ । ‘मायाले साह्रै रुवाउँदो रैछ’ बोलको म्यूजिक भिडियोले निलिमालाई अली बढी चर्चामा...
गुल्मीमा ज्योती मगर शंकर विसीसंग नाच्दा दर्शकले थाम्नै सकेनन्
– अनिल खत्री गुल्मी । उत्तेजक हर्कत गरेर चर्चामा आउने गायिका ज्योती मगरले डान्सर शंकर विसीको हात समाउँदा गुल्मीका दर्शक आफै उत्तेजित भएका छन् । गायिका ज्योतीले गीत गाउँदै डान्सर शंकरसंग नाच्दा तम्घासमा जारी दोस्रो...
२० वर्षपछि शाहरुख काजोलको ‘डिडीएलए’ जोडी नेपालमा
काठमाडौं । २० वर्षपछि एकपटक फेरि शाहरुख र काजोलको ‘डिडीएलए’ जोडी नेपालका सिनेमाघरमा देखिने भएका छन् । २० वर्षपहिले अल वल्र्ड प्रदर्शनमा आएको बलिउड चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएँगे’ फेरि प्रदर्शन आएको हो ।...
‘क्वोंटिको’ शूटिंगमा प्रियंकाको १६ घण्टा !
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ाले टेलिभिजन च्यानल एबीसीको नयाँ धारावाहिक ‘क्वोंटिको’ को शूटिंग शुरू गरेकी छिन् । धारावाहिक ‘क्वोंटिको’ को शूटिंगका लागि अमेरिका पुगेकी अभिनेत्री प्रियंकाले पहिलोदिन १६ घण्टा काम गरेकी छिन् ।...
डडेल्धुरामा क्वारेन्टाईनमा भोक मेटाउन एनडी प्रकाश भोजन चुलो सक्रिय
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा फर्स्योट भए ६ लाख ३५हजार गुनासो
दैलेखमा एक दिनमा ५० जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित सय नजिक
कर्णाली प्रदेशमा थप ३५ जनामा कोरोना पुष्टिसँगै संक्रमितको संख्या २ सय ३३ पुग्यो
कोरोना संक्रमितको संख्या १८ सय ११ पुग्यो, बालबालिकासहित एकै दिनमा २३९ मा कोरोना पुष्टि
पोखरास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा एकको मृत्यु